Apple TV + wuxuu hayaa xuquuqda filimka "Tetris" | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV + wuxuu hayaa xuquuqda filimka "Tetris"
Haddii Apple ay ahaan lahayd shirkad yar ama dhexdhexaad ah, waxaan qiyaasayaa wajiga xisaabiye markasta oo qofka masuulka ka ah Apple TV + inaad lacag weydiisato. "Smith, waxaan u baahanahay 40 milyan si aan u soo iibsado filim aan jeclaysanay ...". "Waayahay Frank, goormaad u baahan tahay iyaga?" (Xaqiiqdii waxay la jiri doontaa magacyo kale, iyo Ingiriisi, dabcan ...).
Smithna wuu iska daayaa iyaga iyadoon wax su'aal ah laga qabin. Marka hore, sababtoo ah Tim gaar ah ayaa madax u ah labada, iyo haddii Frank weydiiyo, waa sababta oo ah Tim wuxuu siiyay Ok u dhigma hawlgalka. Iyo tan labaad, maxaa yeelay Smith, xisaabiye Apple, 40 milyan oo doolar waa isbedel yar small. Guud ahaan, Apple TV + ayaa hada iibsaday filim cusub oo shaki la’aan noqon doona guul cusub: «Tetris«.
Deadline ayaa maanta soo warisay in Apple la siiyay xuquuqda muuqaalka filim soo socda oo cinwaan looga dhigay "Tetris." Sida magaceedaba ka muuqata, waxay ka sheekayn doontaa sheekada cajaladda fiidiyoowga ah ee caanka ah ee la sii daayay markii ugu horreysay 1984, oo ay ku guuleysatay adduunka oo dhan dhawr sano ka dib qaybteeda Gameboy.
Sida lagu sharxay maqaalka, toogashada filimka ayaa la filayaa inuu ka bilowdo horraanta Diseembar Scotland. Waxaa jilaya Aktarka Ingiriiska Taron Egerton kaas oo noqon doona Henk Rogers, oo ah naqshadeeye ciyaarta fiidiyowga ee Dutch kaasoo ugu dambeyntii xaqiijiyey xuquuqda "Tetris" oo shati u siiyay ciyaarta Nintendo asal ahaan Game Boy. Egerton wuxuu caan ku noqday caan ka dib muuqaalkiisii ​​Elton John ee "Rocketman" iyo Gary "Eggsy" Unwin oo ku jiray taxanaha filimka wakiilka sirta "Kingsman."
Filimkan waxaa soo saare ka ah filimka 'Marv Films' ee Matthew Vaughn, oo isna soo saare ka ahaa filimada 'Rocketman»Iyo kuwa«Kingsman«. Jilayaasha kale wali lama xaqiijin, oo uu ka mid yahay injineerka Ruushka u qaabilsan barnaamijka softiweerka Alexey Pajitnov, oo markii ugu horreysay abuuray "Tetris" 1984.
Sida iska cad taariikhda la sii deynayo weli lama cayimin. waxa kaliya ee aan ognahay ayaa ah in si gaar ah looga sii deyn doono Apple TV + the sanadka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple TV + wuxuu hayaa xuquuqda filimka "Tetris"
1Password cusbooneysiinta ku saabsan Mac ku darista furitaanka Watch iyo inbadan